[APK] Azonao atao izao ny manandrana Pixel Launcher izay misolo ny Nexus Launcher | Vaovao momba ny gadget
[APK] Sintomy ary andramo izao ny Pixel Launcher vaovao, na inona ilay Nexus Launcher
Google dia maniry manantitrantitra ny marika Pixel avelao handeha ilay fantatra amin'ny anarana hoe Nexus ary nantsoiny hoe inona ireo fitaovana rehetra natombony tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ireo Nexus izay niaraka taminay hitondra ny fanavaozana Android lehibe hafa izay nametraka ity OS ity tamin'ny toerana sy toerana hafa.
Ny Nexus Launcher dia tafaporitsaka tsy andro vitsy lasa izay. Miverena aloha mba ho afaka misintona ny APK ary nomena anarana hoe Pixel Launcher. Amin'izany fomba izany dia azo lazaina fa Google dia misintaka tanteraka amin'ny marika Nexus ary mitondra antsika amin'ny mpandefa fampiharana izay manasongadina io bokotra io handefasana Google Now avy amin'ny birao. Azafady mba midira eto ambany eto ambany haka izany.
Ny mpandefa vaovao dia matetika mitovy amin'ny Nexus Launcher. Izy io dia manana bokotra mitovy amin'ny tapany havia ambony amin'ny Karoka Google, ny vatasarihana fampiharana mitsivalana ary ny kisary dock eo amin'ny faritra ambany.
Azonao atao ny misintona etsy ambany ny launcher tafaporitsaka avy amin'ny MEGA mba hitsapana ho an'ny tenanao, inona ny lanjany maivana ary tena ilaina amin'ny mpandefa fampiharana. Ny fisie ZIP dia misy ny APK an'ny mpandefa ary koa ny mpifantina an-tsary na ny rindrina. Mampitandrina anao izahay fa mety hitranga ny tsy ahafahanao miditra amin'ny efijery Google Now.
Launcher tena mahaliana izay manomana antsika ho an'io 4 Oktobra io izay hanehoana azy ireo vokatra maromaro avy amin'i Google sy izay ahitantsika ny fahitana Sundar Pichai mampiseho fa mandeha amin'ny vanim-potoana hafa ny Android amin'ny alàlan'ny fametrahana ny Nexus ary manome lalana ny marika Pixel, izay nahitantsika ireo Chromebook isan-karazany tamin'ny mpamokatra isan-karazany.
Sintomy ny Pixel Launcher avy amin'ny Mega
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » [APK] Sintomy ary andramo izao ny Pixel Launcher vaovao, na inona ilay Nexus Launcher
Ireo no fitaovana Apple izay azo havaozina amin'ny iOS 10 anio
Movistar dia manala ny Spanish BQ ao amin'ny katalaoginy ara-barotra